မျောက်ငိုသီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » မျောက်ငိုသီး	28
Posted by တောတွင်းပျော် on Aug 12, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 28 comments
( ကြက်ခြေခတ် မှတ်စု )
ဖုတ်၍ ဖုတ်၍ သော်လည်းကောင်း
ပြုတ်၍ ပြုတ်၍ သော်လည်းကောင်း
ကြော်၍ လှော်၍ သော်လည်းကောင်း
လူမျိုးပေါင်းတကာတို့တညီတညွတ်တည်းဆိုကြသည်မှာ
” ငပိ ”
တောလည်ကနေ အပြောကြွယ်တာရယ် မဟုတ်
အနံ့ တကြိုင်ကြိုင်နဲ့ 
ဒင်းတို့ တစ်တွေ လှိုင်လှိုင်သီးပါလေ့ 
လေဝှေ့ ရာနွဲ့ ယိမ်းကခုန် နတ်ကိန္နရာမလေးတွေလို
ကိုင်းဖျားမှာတဲ့ယီးလေးခိုရင်း
တေးလေးဆိုလို့မြူးကြတယ်။
ဆွေမတော် မျိုးတော်တို့ ကလည်း
မြို့ ဆို့ ကာ စားချင်ကြပေမင့် 
လှမ်းမမှီ ဆွတ်ချူခက်တာကြောင့့်ကွယ်
ပင်ခွမှာ ဆောင့် ကြောင့် လို့ ထိုင်
အိုး! စားပါရစေကွဲ့ ..
ပေးပါလှဲ့ရယ်လို့ …
တဖွဖွနဲ့တရရှာလေတယ်ကွယ်။
အခုချိန်ခါဆို ကျနော်တို့ တောထဲမှာ
မျောက်ငိုသီး( patai )တွေ လှိုင်လှိုင်သီးနေပြီ။
သူ့ အနံ့ က ဆူးပုတ်နံ့ မျိုး။ မြန်မာပြည်
သူလည်း ဒညင်းသီးလို အတက်စာ။
အခုတော့camp မှာ ဒါချည်းပဲ နေ့ တိုင်းစားနေရပြီ။
ယောင်္ကျားဘသား တောတွင်းပျော်တွေ နေတဲ့camp ဘေးပတ်လည်မှာတော့ဒင်းအနံ့ က
သင်းပျံ့ ပျံ့ ။
ဘယ်သူလည်းလို့ မမေးပါနဲ့ ။
တစ်ယောက်မှ မလွတ်ဘူး။ အဟီး..!
ရွာသူားတွေအတွက် တောတွင်းပျော်ရဲ့ မျောက်ငိုသီးလက်ဆောင်
Alinsett @ Maung Thura says: .မျောက်တွေ တကယ် ငိုတဲ့ အတီးလားငင်
တောတွင်းပျော် says: မျောက်တွေ တကယ်မငိုပါဘူး ကိုအလင်းဆက်။
သူတို့အလွန်နှစ်သက်တဲ့အသီး။ ကိုင်းဖျား အစွန်းမှာ
တွဲလောင်းချိတ်သီးတာမို့သူတို့ လည်းခူးရခက်တယ်။
ဒေသကလူတွေကတော့လေ့ ကျင့် ပေးထားတဲ့ မျောက်
(မျောက်ဖင်နီ) တွေနဲ့ ခူးကြတယ်။
ကျနော်တို့ ကတော့မှီနိုင်သလောက် အကိုင်းဖျားထိတက်
အဲဒီကနေ တုတ်တံချူနဲ့ခူးရတာ။
ဦးကျောက်ခဲ says: အဟိ… ပဲဒညင်းလို့လည်း ခေါ်တယ်ဟုတ်…
စလုံးမှာနေတုံးက မလေးဈေးမှာ အပုံလိုက်ချရောင်းတယ်…
ဝက်သားနဲ့ချက်စားရင် အီအီဆိမ့်ဆိမ့် အရသာရှိပါ့…
အဲ… ဘုန်းလေမြူးရင်တော့ ကွကိုယ်တောင် အနံ့မခံနိုင်… ဟီး ဟီး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့ စမယ်လင်း ဘီး(န) လို့ ခေါ်တာ။
ဒညင်းသီးထက် ပိုဆိုးတာ သူက စိမ်းရွှေရွှေနံ့ ပိုတယ်။။
အဲလေ မျောက်ငိုပို့(စ) မှာ လာငိုနေလို့ မဖြစ်သေးပါဘူးးး
တောတွင်းပျော် says: ဟယ်!
ကျနော့့မျောက်တွေနဲ့လာပြိုင်ရတယ်လို့ 
HMM says: စမယ်လင်း ဘီး(န)ကို ဒညင်းသီးနုနုလေးတွေမှတ်လို့ သူများတွေတောင်လိုက်ညွှန်းလိုက်သေး…
တောတွင်းပျော် says: အမခင်ဇော်တို့HMM တို့ ပြောတဲ့စမယ်လင်း ဘီး(န) ကို အခုမှကြားဖူးတာ..
Mike says: .မတွေ့ဖူးသေးဘူးဗျ…အ၀င်နံ အထွက်နံသီးပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 393
တောတွင်းပျော် says: ကြိုက်တတ်ရင်တော့ 
အဝင်လည်း မွှေး အထွက်လည်းမွှေးပေါ့ 
အောင် မိုးသူ says: အဲ့အပင်က စိန်ပန်းလို ပွင့်တဲ့ အပင်လား သိပ်မသိလို့
တောတွင်းပျော် says: ရုတ်တရက်ကြည့် ရင်တော့အရွက်တွေက စိန်ပန်းနဲ့ တူသလိုလို
သူကက ရိုးတံထိပ်မှာ ဂေါက်သီးအလုံးလှိုမှာ အပွင့် ပွင့် ပြီး အဲ့ ကနေ အသီး သီးတာ
manawphyulay says: မျှောက်ငိုသီးလား…. မျောက်ဆော့သီးလား… ဟင်..
တောတွင်းပျော် says: မျောက်တွေက အဝ စားပြီးရင် ကျန်တဲ့ အသီးတွေကို
ဘက်ထရီကုန်တော့ မှာမို့ကျန်တဲ့ကော်မင့် တွေ နောက်နေ့ မှ
kai says: ဒညင်းသီးက..ကျောက်ကပ်ထိတယ်ပြောတော့ကာ…
မျောက်က.. ငပိနဲ့ထိရင်လည်း.. အနံ့မခံနိုင်..
တောတွင်းပျော် says: ငပိထိမိတဲ့ လက်ကို အရေပွန်းအောင်ထိ သနားစဖွယ်
ပွတ်တိုက်တာတော့မြင်ဖူးတယ်။
aye.kk says: မစားဘူးလို့စားကြည့်ချင်မိတယ်။
တောတွင်းပျော် says: အတို့အမြို့ကြိုက်တတ်တဲ့ဘယ်သူမဆို ကြိုက်တတ်တဲ့အသီးပါ
Ma Ei says: http://nwayhtethtetlinn.blogspot.com ဒီမှာ ဒါလေးတွေ့လို့ ဖတ်ရအောင် လာပို့လိုက်ပါတယ်..
ဆေးလိပ် ဖြတ် ရာတွင် နီကိုတင် (Nicotine ) ပျက်စေတယ် ။ “New England Journal of Medicine” လေ့လာချက်အရမျောက်ငိုသီး မကြာခဏ စားတဲ့သူက လေဖြတ်စေဆုံးရခြင်းအန္တရာယ်မှကင်းဝေးနှုန်း ၄၀% ရှိပါတယ် ။
တောတွင်းပျော် says: အမ မအိရေ…
မမ ကျင်လိ ရဲ့မျောက်ငိုသီးအကြောင်း ကျနော့fb မှာသူတင်ပေးခဲ့ တာ ပြန်တင်ပေးချင်ပေမယ့်လိုင်းအခြေအနေကြောင့်ရှာမလွယ်ခဲ့ ဘူး။
သူ့ ရဲ့ ဒီပိုစ်ကို မြန်မာပြည်က နာမည်ကြီးစာစောင်တစ်ခုကနေ သူ့ ဆီကခွင့် မတောင်းပဲ တခြားနာမည်တစ်ခုနဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပြီး
ခပ်တည်တည်ပြန်တင်ထား တွေ့ ဖူးတော့စိတ်မကောင်းဘူး။
သူကမြန်မာပြည်ကို သံယောဇဉ်ကြီးပြီး ဘာသာတရား အလွန်လေးစားကြည်ညိုတဲ့မြန်မာပြည်ပေါက် တရုပ်လူမျိုးပါ။ အခုတော့ထိုင်ဝမ်မှာနေပြီ ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါးတွေ အမြဲရေးတင်ပေးနေတဲ့ ပါ။ အလွန်လေးစားဖွယ်ကောင်းတဲ့ အမကြီးတစ်ယောက်ပေါ့ ။
ဟေသီ says: တစ်ခါမှ မစားဖူးဘူး။ ကြားတော့ ကြားဖူးတယ်။ အပြင်မှာကို မမြင်ဘူးသေးတာ။ ကိုယ်တွေ ဗဟုသုတ မရှိပုံများ ပြောပါတယ်။
တောတွင်းပျော် says: မြန်မာပြည်က နေရာတိုင်းမှာတော့မရှိဘူး။
ချင်းပြည်နဲ့အိန္ဒယဘက် လူရှိုင်းပြည်နယ်ဖက်မှာတော့ တွေ့ ဖူးတယ်။
Ma Ma says: ဒီအတိုင်းကြည့်တာ ပဲကြီးနဲ့တူသလားလို့။
မအိပြောပေးတဲ့ ကျန်းမာရေးတန်ဖိုးတွေများမှန်းသိရတာကြောင့်လည်းကောင်းးးး တညင်းသီးကြိုက်တာကြောင့်လည်းကောင်းးးးး စားချင်လာပြီ။
မျောက်ငိုသီးကို တခြားဘယ်လိုခေါ်သေးသလဲ မသိဘူး။
တောတွင်းပျော် says: မြေပြန့် ဒေသမှာ ရဖို့ တော့ မလွယ်ဘူးထင်တယ် မမ။
ဦးကျောက်တို့အမခင်ဇော်တို့ ပြောတဲ့နာမည်ကိုတောင်မှ
naywoon ni says: ကျုပ်​တိူ့ဆီက ​ဘောစဂိုင်း သီးနဲ့ တူသလားလားလို့ ။ အဘများ ​ရွှေညန်​​ဒေါ်စူး​ရောက်​ချက်​က ကြီးမြန်​သစ်​ပင်​ဆိုဆိုပြီး ​နေရာတိုင်းမှာစိုက်​ကြတာ ။ အရင်​က သစ်​​တောက ​ဝေတယ်​ ။ သစ်​ပင်​စိုက်​တဲ့လဆို စိုက်​ကြတာ​ပေါ့ ။ သစ်​ကိုင်းက ဆတ်​ ထင်းဆိုက်​​တော့လည်းပြာအဖြစ်​မြန်​ ။ အ​စေ့က​ပေါ့​တော့ ​လေနဲ့လွင့်​ပါသွားပြီး အပင်​ပွားမြန်​ ။ အဲ့အသီးဆိုရင်​​တော့ ကျုပ်​တို့ဆီမှာ​ပေါမှ​ပေါ ​ဘောစဂိုင်းကို​ပြောတာ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 393
တောတွင်းပျော် says: ကျနော် ဘောစဝိုင်းပင်ကို မမြင်ဖူးဘူး။
ဒီမှာက အာကာရှားခေါ်တဲ့ အပင်တစ်မျိုးရှိတယ်။
သူက ကြီးမြန် ပွားမြန်နဲ့ပျော့ ဖတ်ထုတ်ဖို့ လားမသိ
ဦးကြောင်ကြီး says: .. မျောက်ငိုသီး သောက်ပိုရွှီး ဒေါက်တိုမီး ရှောက်ချိုတီ..
တောတွင်းပျော် says: ကိန်!
တောတွင်းပျော် says: ဒီကျနော့ ပိုစ်က ကိုအလင်းဆက်အကူအညီကြောင့် 
ရွာထဲကိုရောက်လာနိုင်တာ။ ကျေးဇူးအထူးနော် ကိုအလင်းဆက်။
လိုင်းအခြေအနေကြောင့်ကော်မန့် တွေ ပြန် reply လုပ်ဖို့ရွာထဲကို
အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားဝင်ရတာ။ တစ်ကြိမ်ဝင် ကော်မန့်၁ခု ၂ခုပြန်လိုက်
လိုင်းလေးသွားလိုက်နဲ့အချိန်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေခဲ့sorryပါနော်။